(၃၄) သိန်းတန်​ LV အိတ်​တစ်​လုံး လက်​​ဆောင်​ရလို့​ပျော်​​နေတဲ့ ​ကျော်​​ကျော်​နန္ဒရဲ့ဗီဒီယို - Thadin
HomeCELEBRITY(၃၄) သိန်းတန်​ LV အိတ်​တစ်​လုံး လက်​​ဆောင်​ရလို့​ပျော်​​နေတဲ့ ​ကျော်​​ကျော်​နန္ဒရဲ့ဗီဒီယို
(၃၄) သိန်းတန်​ LV အိတ်​တစ်​လုံး လက်​​ဆောင်​ရလို့​ပျော်​​နေတဲ့ ​ကျော်​​ကျော်​နန္ဒရဲ့ဗီဒီယို
March 17, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on (၃၄) သိန်းတန်​ LV အိတ်​တစ်​လုံး လက်​​ဆောင်​ရလို့​ပျော်​​နေတဲ့ ​ကျော်​​ကျော်​နန္ဒရဲ့ဗီဒီယို
လတ်တလော ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ “ဆက်ပက်” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော် ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ ထိုးဖောက်လာသူတစ်ဦးမို့ အချိန်တိုအတွင်း ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ကျော်ကျော်နန္ဒက ဆက်ပက် သင်္ကြန်သီချင်းကြောင့် ဝိုင်းဆဲနေကြလို့ မီဒီယာများမှတစ်​ဆင့်​​ ​တောင်းပန်​ဖို့ စာနယ်​ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ​လေးတစ်​ခု ပြုလုပ်​ခဲ့တာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ အဆိုပါပွဲအပြီးမှာ​တော့ ​ကျော်​​ကျော်​နန္ဒက ၃၄သိန်းတန်​ LV အိတ်​ကြီးလက်​​ဆောင်​ရခဲ့တဲ့အ​ကြောင်း လူမှုကွန်​ယက်​မှာ တင်​ထားတာပါ။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ၃၄ သိန်းတန်​ LV အိတ်​တစ်​လုံး လက်​​ဆောင်​ရလို့​ပျော်​​နေတဲ့ ​ကျော်​​ကျော်​နန္ဒရဲ့ဗီဒီယို​လေး ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
​ကျော်​​ကျော်​နန္ဒက​တော့ “ဒီနေ့ ၃၄ သိန်းတန် LV အိတ်ကိုHoney kway page က ဒီနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ ပရိသတ်ကိုတောင်းပန်တဲ့ဆက်ပက်သင်္ကြန် စာနယ်ဇင်း မီဒီယာပွဲကအပြန်LV အိတ်လေးလာပေးပါဒယ် ဗျ ကျေးကျေးပါ”ဆိုပြီး ​ပျော်​ရွှင်​စွာ ​ရေးသားထားတာပါ။
တန်​ဖိုးကြီးLV အိတ်​တစ်​လုံး လက်​​ဆောင်​ရလို့​ပျော်​​နေတဲ့ ​ကျော်​​ကျော်​နန္ဒရဲ့ဗီဒီယို
ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ အခုဆိုရင်​ အနုပညာသက်​တမ်း ၁၀နှစ်​​ကျော်​သွားပြီပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ သူက​တော့ လတ်တလောမှာ အနုပညာမောင်နှမ​တွေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ၃၄ သိန်းတန်​ LV အိတ်​တစ်​လုံး လက်​​ဆောင်​ရလို့​ပျော်​​နေတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
လတျတလော ဖစျေ့ဘုတျပျေါမှာ “ဆကျပကျ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးနဲ့ နာမညျကွီးနတေဲ့ အဆိုတျော ကြျောကြျောနန်ဒကတော့ တဈမူထူးခွားတဲ့ ဖနျတီးမှုတှနေဲ့ ထိုးဖောကျလာသူတဈဦးမို့ အခြိနျတိုအတှငျး ပရိသတျတှရေဲ့စိတျဝငျစားမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတာပါ။ လတျတလောမှာတော့ ကြျောကြျောနန်ဒက ဆကျပကျ သွင်ျကနျသီခငျြးကွောငျ့ ဝိုငျးဆဲနကွေလို့မီဒီယာမြားမှတဈဆငျ့ တောငျးပနျဖို့ စာနယျဇငျးရှငျးလငျးပှဲလေးတဈခု ပွုလုပျခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။ အဆိုပါပှဲအပွီးမှာတော့ ကြျောကြျောနန်ဒက ၃၄သိနျးတနျ LV အိတျကွီးလကျဆောငျရခဲ့တဲ့အကွောငျး လူမှုကှနျယကျမှာ တငျထားတာပါ။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ၃၄ သိနျးတနျ LV အိတျတဈလုံး လကျဆောငျရလို့ပြျောနတေဲ့ ကြျောကြျောနန်ဒရဲ့ဗီဒီယိုလေး ကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ကြျောကြျောနန်ဒကတော့ “ဒီနေ့၃၄ သိနျးတနျ LV အိတျကိုHoney kway page က ဒီနပွေု့လုပျတဲ့ ပရိသတျကိုတောငျးပနျတဲ့ဆကျပကျသွင်ျကနျ စာနယျဇငျး မီဒီယာပှဲကအပွနျLV အိတျလေးလာပေးပါဒယျ ဗြ ကြေးကြေးပါ”ဆိုပွီး ပြျောရှငျစှာ ရေးသားထားတာပါ။
တနျဖိုးကွီးLV အိတျတဈလုံး လကျဆောငျရလို့ပြျောနတေဲ့ ကြျောကြျောနန်ဒရဲ့ဗီဒီယို
ကြျောကြျောနန်ဒကတော့ အခုဆိုရငျ အနုပညာသကျတမျး ၁၀နှဈကြျောသှားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူကတော့ လတျတလောမှာ အနုပညာမောငျနှမတှနေဲ့ အနုပညာအလုပျတှေ ဆကျတိုကျပွုလုပျဖွဈနတော တှရေ့ပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှလေညျး ၃၄ သိနျးတနျ LV အိတျတဈလုံး လကျဆောငျရလို့ပြျောနတေဲ့ ကြျောကြျောနန်ဒကို သဘောကတြယျဆိုရငျ share သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
မြန်မာတစ်ဦးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ကိုရီးယား ၄ ဦးရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့…!
အသက်မပြည့်သေးသည့် ညီအမသုံးယောက် အိမ်ကထွက်သွားလို့ မေးမြန်းရာမှ ပထွေးလက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်နေ…!
This Month : 40068
This Year : 235466
Total Users : 594490
Total views : 2729145